Reeffi Artist Haacaaluu Ambo Geessame. Naqamtee fi Jimma Keessatti Walitti-bu’insi Uumame
Waxabajjii 30, 2020
Artist Haacaaluu Hundeessaa
AMBOO, WAASHINGITAN, DIISII —
Reeffi artistii beekamaa fi jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa helikooptaraan gara bakka dhalata isaa Ambootti geessamee jira. Yeroo gabaasaan kun qindeessametti reeffi Haacaaluu mana warra isaa magaalaa Amboo, ganda Toorban Kutaayee jedhamu dhaqqabuun isaa himamee jira.
Artist Hacaaluu ajjeesamuutti rifaatuu fi gadda itti dhaga’ame ibsachuuf uummata magaalaa Naqamteetti hiriira bahee fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu’insa uumameen, namoonni du’anii fi madaa’an jiraachuu, hiriirtotaa fi Hospitaala Ispeeshaalaayizdii Naqamtee irraa VOAf ibsanii jiran.
Magaalaa Jimmaa keessattis akkasuma hiriirtotaa fi humnoota mootummaa gidduutti walitti-bu’insi uumamee namaa fi qabeenyaan miidhamuu tu himame. Kan dhimma sana hordofaa ture gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Ambo irraa dubbisnee jirra.
Gaaffii fi deebii guutuu caqasaa.
Reeffii Artist Haacaaluu Ambotti Geessame. Naqamtee fi Jimma Keessatti Immoo Walitti-bu’insi Uumame
Artiistii Oromoo Beekkamaa Haacaaluu Hundeessan Finfinnee Keessatti Ajjeefame
Artist Haacaaluu Hundeessaa Ajjeefame Jedhama
Harrootni Itiyoophiyaa Seeraan Ala Keeniyaatti Gurgurmu
COVID-19 Hammaachuun Biyyoonni Deebisanii Akka Cufaman Dirqisiisaa Jira
Hoogganoonni Cichaan Hojjechuu Dhabuun Walitti Bu’iinsa Daangaa Irraa Hammeesse: Bulchoota Amaaraa fi Affaar
Itiyoopiyaan Qooda Gamtaan Afriikaa Marii Dhimma Abbayaa Keessaa Qabu Simattee Jirti